Wadayaasha Gaadiidka Dadweynaha Garoowe oo Shaqojoojin sameeyay – SBC
Wadayaasha Gaadiidka Dadweynaha Garoowe oo Shaqojoojin sameeyay
Gaadiidka Dadweynaha ee ka shaqeeya xaafadaha magaalada Garoowe Xarunta dowlada Puntland ayaa maalintii labaad ku jira Shaqo joojin ay sameeynayaan ka dib caqabado ay sheegeen in ay ugu horeyso shidaalki ay ku shaqeyn lahaayeen oo qiimo koror ku yimid iyo lacagihii ay dadweynaha ku raacayeen gaadiidka oo ay kordhiyeen dhankooda.
Mid ka mid ah Wadayaasha Gaadiidka PL-ada oo lagu magacaabyo C/casiis Cismaan ayaa u sheegay xafiiska SBC International ee magaalada Garoowe in sababaha ugu weyn ee ay u joojiyeen shaqooyinkoodii ay tahay kor u kac ku yimid shidaalka iyo faa’iido la’aan soo foodsaartay iyagoona marka ay u hoydaan Habeenkii guryahooda aysan jirin wax ay kula hoydaan.
Dadweyanha magaalada Garoowe gaar ahaan Haweenka iyo dadka xoogsatada ah ayaa siweyn u dareemay Shaqo joojinta maalintii labaad ay sameeyeen gaadiidka PLlada Looyaqaan, waxaana siweyn loogaga dareemay arimahani sidoo kale goobihii xarumaha u ahaanjirtay gaadiidkani oo aan wax shaqo ah ka socon.
Inkastoo ay goosteen Wadayaasha Gaadiidkani in mudo 6maalin ah ay wadaan shaqo joojintani ayaa hadii ay hirgasho waxaa u qorsheysan qaarkood in ay u shaqo tagaan magaalooyinka kale ee Puntland .
sikastaba ha ahaatee Masuuliyiinta Dowlada Hoose ee garoowe oo ay arintani quseyso ayaa mar aynu xiriir kala sameynay, waxay ka gaabsadeen in ay ka hadlaan arimahani.